ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း "erotica ထိတွေ့မှုကယောက်ျားတွေမှာရှိတဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးမှုလျော့နည်းစေသလား။ Kenrick, Gutierres နဲ့ Goldberg (၁၉၈၉) လေ့လာမှု ၂ ရဲ့လွတ်လပ်သောတုန့်ပြန်မှု - Your Brain On Porn"
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း“ erotica နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အမျိုးသားများရှိအချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလျော့နည်းစေသလား။ Kenrick, Gutierres နှင့် Goldberg (၁၉၈၉) လေ့လာမှု ၂ ၏အမှီအခိုကင်းသောတုန့်ပြန်မှုများ
comments: ဤ လေ့လာမှုအသစ် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစိတ္တဇ) ကိုကိုးကားထားသော ၁၉၈၉ ခုနှစ်စမ်းသပ်မှု၏“ ကျရှုံးမှုမရှိသောပွားခြင်း” အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းကြောင်းသက်သေပြနေသည်။
porn ကိုတကယ်ကြည့်ရှုပါလျှင်ပထမဦးစွာပြုလုပ်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများတငျပွနိုငျကွောငျးကိုတောင်းဆိုဖို့စိတ်ပျက်ဖွယ်င် အကြောင်းတရားများ အနုတ်လက္ခဏာကြားဆက်ဆံရေးဆိုးကျိုးများ။ 'ကောလိပ်ကျောင်း-အသက်ယောက်ျားတွေအနည်းငယ်ရှုမြင်ဘယ်မှာစမ်းသပ်မှု Playboy (လေ့လာမှုမှာကဲ့သို့) centerfolds သငျသညျအဆုံးပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာခက်ခဲ-Core Video Clip ဖို့တစ်ရက်အပြီးတစ်ရက် masturbating သင်၏လင်၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောပြနိုင်။
အဖြစ်မှန်မှာတော့အမျိုးသားများပါဝင်သောတိုင်းတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုကိုပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအစီရင်ခံထားပါတယ် ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ အားလုံးထဲမှာ, 70 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ ဘာသာရပ်များ porn ကြဉ်ရှောင်ဘယ်မှာ variable တွေကိုသို့မဟုတ်လေ့လာမှုများအဘို့ထိန်းချုပ် longitudinal လေ့လာမှုများရှိပါသည် 70 သည်ဤ 8 ကြားဆက်ဆံရေးလေ့လာမှုများ၏။ ယနေ့အထိခုနစ်ခု longitudinal ကြားဆက်ဆံရေးလေ့လာမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစစ်အမှန်ဘဝအကျိုးဆက်များထုတ်ဖေါ်ကြောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ အားလုံး : porn အသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေး / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များဆက်စပ်ကြောင်းအစီရင်ခံ
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု: တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု (2009).
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့် One ရဲ့ Romantic Partner (2012) ကိုအားနည်းစေကတိသစ္စာ: နောက်ဆုံးမဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမေတ္တာ.
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးမြင့်: အသစ် weds (2015) အကြားညှိနှိုင်းမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းအတွင်းနှင့်အကြားမိတ်ဖက်သက်ရောက်မှု၏ longitudinal လေ့လာမှု.
Porn Do ကြှနျုပျတို့ကိုအပိုင်းသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, ကွာရှင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု longitudinal အကျိုးသက်ရောက်မှု, (2016).
ကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကျော်အချိန်ကိုလျှော့ချပါသလား? longitudinal ဒေတာများ (2016) မှသက်သေအထောက်အထားများ.
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများတစ်ဦးကရိုမန်းတစ်အဖွဲ့ဟာစမ်းသပ်ပါမှပိုတူသနည်း longitudinal ဒေတာများ (2017) မှသက်သေအထောက်အထားများ.
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေး Separation: Two-Wave ကို Panel ကိုဒေတာများ (2017) မှအထောက်အထား.
အဆိုပါ 2017 လေ့လာမှုနှင့်၎င်း၏အလွယ်တကူပယ်ချရလဒ်များကိုမှ on: erotica ထိတွေ့ယောက်ျားအတွက်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းလျှော့ချပါသလား? Kenrick, Gutierres နှင့် Goldberg (1989) ၏လွတ်လပ်သောပွား.
အဆိုပါ 2017 လေ့လာမှုတစ်ဦးပုံတူပွားရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် 1989 လေ့လာချက် လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုသည့်ဆက်ဆံမှုရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်လေ့လာမှုအရအဝတ်အချည်းစည်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသောအမျိုးသားများဖြစ်သည် Playboy centerfolds လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက် rated နှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များအတွက်လျော့နည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2017 တွေ့ရှိချက် 1989 တွေ့ရှိချက်ပုံတူပွားရန်ပျက်ကွက်အဖြစ်ကျနော်တို့ 1989 လေ့လာမှုမှားတယ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနေကြသည်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒလျော့လို့မရပါဘူး။ အို! သိပ်မမြန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုပတ် ၀ န်းကျင်သည်“ ညစ်ညမ်းမှု” ဖြစ်လာသောကြောင့်ပုံတူပွားခြင်း“ မအောင်မြင်” ပါ။ ၂၀၁၇ သုတေသီများသည် MTV ကိုကြည့်ပြီးကြီးပြင်းလာသည့် ၁၉၈၉ ကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုမခေါ်ယူခဲ့ပါ။ အဲဒီအစားသူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်များဟာလူဆိုးဂိုဏ်းဝင်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ orgy ဗီဒီယိုကလစ်တွေအတွက် PornHub ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အများအပြားကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးက X-rated ဗီဒီယိုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပုံကို 1989 ခုနှစ်တွင်? သိပ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နှစ်ယောက် 1989 ကောလိပ်ကျောင်းသားများကတဦးတည်း session တစ်ခုအတွက်မျိုးစုံခက်ခဲ-Core ကလစ်ပ်မှ masturbating ပေါ်တွင်အပျိုဖော်ဝင်စကနေ, တိုင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session ကိုသုံးစွဲ? အဘယ်သူမျှမ။ အဆိုပါ 2017 ရလဒ်များကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ထင်ရှား: တစ်တစ်နေဆဲပုံရိပ်မှအကျဉ်းထိတွေ့မှု Playboy centerfold 2017 အတွက်ကောလိပ်ကျောင်းယောက်ျားနှစ်ပေါင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြီးမားတဲ့ဟနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပင် စာရေးသူ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအတွက်အသိပေးချက်အတူမျိုးဆက်ကွဲပြားခြားနားမှုဝန်ခံ:
1) ပထမဦးစွာပြုလုပ်မူရင်းလေ့လာမှု 1989 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့သော်လည်း, ယနေ့အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ, ဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေထိတွေ့အတော်လေးပိုပြီးနေရာအနှံ့ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်တစ်ဦးဝတ်လစ်စလစ် centerfold ထိတွေ့ခံရခြင်းမူလကအစီရင်ခံသည်အဆိုပါဆနျ့ကငျြဘအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိပွားလေ့လာမှုများများအတွက်ရလဒ်များကိုယခုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မူရင်းထိတွေ့မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်လေ့လာမှု, access ကိုနှင့် erotica ပင်လက်ခံမှုကှာခွားနိုငျသညျ။
ဒီစမ်းသပ်မှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမဆိုလိုပါကိုသတိပြုပါ မရှိတယ် သူတို့ရဲ့ချစ်သူများအဘို့ယောက်ျားရဲ့ဆွဲဆောင်မှုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ "centerfolds" မှာရှာဖွေနေဒီရက်မျှချက်ချင်းသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ အတော်များများကယောက်ျားအစွန်းရောက်သတင်းပို့ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်းပြီးနောက်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မှုအတွက်တိုး။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ deleterious သက်ရောက်မှုသရုပ်ပြအထက်တွင်ကိုးကားသည့် longitudinal သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဤစာတမ်း၏စာရေးဆရာများအနောက်တိုင်းအွန်တက္ကသိုလ်မှတေလာ Kohut ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဝီလျံ Fisher ကဦးဆောင်သောသုတေသီများ၏ဤအုပ်စုတစ်စု, တစ်သမတ်တည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာများပြားလှအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်သွယ်ထားသောကျယ်ပြန့်စာပေတန်ပြန်ရန်ပေါ်လာကြောင်းရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့မေးခွန်းထုတ်စရာလေ့လာမှုများ, ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, Kohut နှင့် Fisher နှစ်ဦးစလုံး၏ရှုံးနိမ့်အတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍကစား ကနေဒါ motion 47.
ဤတွင်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အထင်အမြင်မှားစေခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်စပါးကိုရိတ်ကြောင်း Kohut, Fisher ကအနောက်တိုင်းအွန်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ်ဦးမကြာသေးမီလေ့လာမှုများနေသောခေါင်းစဉ်:
1) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏စုံလင်သောဆက်ဆံရေးအပေါ်ရိပ်မိအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးမှု၊ “ အောက်မှအောက်သို့” သုတေသန (၂၀၁၇)၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ လန်းကမ့်ဘဲလ်
သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၇ လေ့လာမှုမှာ Kohut, Fisher နဲ့ Campbell ဟာသူတို့ရှာဖွေတဲ့ရလဒ်တွေကိုရရှိဖို့နမူနာကိုလွဲချော်သွားပုံရသည်။ လေ့လာမှုအများစုမှဖော်ပြသည်မှာညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသူများ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနည်းငယ်ကညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဤလေ့လာမှုတွင် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများသည်အပြာများကိုကိုယ်တိုင်သုံးကြသည် (အမျိုးသမီးများ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လိင်မှုကိစ္စစတင်ကတည်းကကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်) ။ ထိုနှုန်းထားများသည်ကောလိပ်ရှိအမျိုးသားများထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီးအခြားညစ်ညမ်းမှုလေ့လာမှုများထက်များစွာမြင့်မားသည်။ တနည်းအားဖြင့်သုတေသီများသည်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်၎င်းတို့၏နမူနာကိုလွဲချော်သွားပုံရသည်။ အဖြစ်မှန် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကြီးဆုံးစစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်း) မှကဏ္ Cross အလိုက်ဒေတာ ၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းသာပြီးခဲ့သည့်လက“ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်” သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်
ထို့အပြင်ကိုဟွတ်၏လေ့လာမှုကဘာသာတရားများသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လှောင်ပြောင်နိုင်သည့်“ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း” မေးခွန်းများသာဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖတ်ရှုပြီးဖတ်ပြီးနောက်တွင်မည်သည့်အဖြေများသည်“ အရေးကြီးသည်” (သူတို့လိုချင်သောဇာတ်ကြောင်းနှင့်ကိုက်ညီပါသနည်း) ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်နှင့်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျပြောင်းလဲနိုင်သောအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ ဆက်ဆံရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်အတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပြသသောနီးပါး 60 လေ့လာမှုများ) ။ စက္ကူအစီရင်ခံအရာအားလုံးပါဝင်သည် (သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်လိုက်) ကစာရေးသူ၏သွဇာအောသမ္မာသတိမှာခဲ့ပါတယ်။
2) “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်“ အမျိုးသမီးများကိုမုန်းတီးခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍“ ဝေဖန်မှု” လား။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်စားပြုသူအမေရိကန်နမူနာတွင်အသုံးပြုသူများထက်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုရှိကြသည်။ ” (2016),
ရှုမြင်သုံးသပ်ကြတေလာ Kohut Co-စာရေးဆရာများ သာတူညီမျှ အဖြစ်: (1) ကိုယ်ဝန်ဖျက်, (2) အတွက်ပံ့ပိုးမှု Feminist ဖော်ထုတ်ခြင်း, အာဏာရာထူးကိုင်ပြီး (3) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (4) ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရှိပါတယ်သည့်အခါမိသားစုဘဝကြုံတွေ့နေကြရသည်ကြောင်းယုံကွညျနှင့်ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက် (5) ပိုပြီးကျင်းပခြင်း အစဉ်အလာမိသားစုဆီသို့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားတွေ။ ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့ရသောလောကလူဦးရေ, ဝေးရှိ ဘာသာရေးလူဦးရေထက် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်း။ ဤအစံရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အဆုံးမဲ့သည်အခြား variable တွေကိုလျစ်လျူရှုအသုံးပြုပုံခဲရေးသားသူ Kohut နှင့်သူ၏တွဲဖက်ရေးသားသူ "သူတို့ပါဝငျသောအရာကို၏ဤလေ့လာမှုရဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူရွေးချယ်ရေးအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ porn အသုံးပြုသူများကိုအတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိတယ်သာတူညီမျှ။"ထိုအခါစာရေးဆရာများကအားလုံးကိုပတ်ချာလည်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့အဲဒီတွေ့ရှိချက်နီးပါးသည်အခြားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေ့လာမှုများကဆန့်ကျင်နေကြသည်။ (ကြည့်ရှုပါ ကျော် 25 သဘောထားတွေလိင်အရအခွင့်အရေးမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ, objectification နှင့်လျော့နည်း၏ဤစာရင်း သာတူညီမျှ.)
မှတ်စု: ဤသည် 2018 တင်ဆက်မှုရုံဆွေးနွေးနှစ်ခုလေ့လာမှုများအပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျ: porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
Leonhardt et al။ , 2019 လိပ်စာများစက္ကူ
BACKSTORY: 2018 အဆိုပါခုနှစ်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Leonhardt et al ။ , 2018 နှင့်မှတ်ချက်အဘို့ဟုမေး၏။ sexology ဂျာနယ်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်သည့်အမြစ်တွယ်နေပြီးဘက်လိုက်မှုထုတ်ဖော်ခြင်း,4မှတ်ချက်အ6အားဖြင့်ခဲ့ကြသည် RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" Samuel Perry၊ Taylor Kohut၊ Nicole Prause နှင့် David Ley (Ley နှင့် Prause တို့သည်ပညာရှင်များမဟုတ်ကြပါ၊ Ley သည်မူလသုတေသနကိုထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးပေ) (RealYBOP သည် YBOP ၏ဝေဖန်မှုများကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးစားနေသည် YBOP ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူသည်။)
RealYBOP နှင့်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများသည်ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏အစီအစဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်တက်ကြွစွာပါဝင်နေကြသည် (Ley qed သည် xHamster အားဖြင့်ပေးဆောင်) ။ porn exonerate နှင့်အများပြည်သူရှုပ်ထွေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာတော့သူတို့နာတာရှည်ကဲ့သို့သောချယ်ရီ-ကောက်ယူဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်စာတမ်းများကိုးကား Balzarini et al ။ , 2017 - နီကိုးလ် Prause သူမ၏သံသယရှိဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပြုသကဲ့သို့
2019 ခုနှစ်, Leonhardt et al ။ အားလုံးနှင့်အတူ6မှတ်ချက်တုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်လိင်အရည်အသွေး: ရည်မှန်းချက်, ကွဲပြားနှင့်ရှင်းလင်းမှတ်ချက်ပေးခြင်းမှ reflex-တုံ့ပြန်မှု (2019).ဒီနေရာမှာစာရေးသူတွေတင်ပြတဲ့ (နားလည်မှုမရှိပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့) ကောက်နုတ်ချက်ပါရှိပါတယ် Balzarini et al ။ , 2017 နှင့်အစွန်းရောက်ချယ်ရီကောက်ယူခြင်း၏ Prause ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းအလေ့အကျင့်:
Prause (2019) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှု, တကယ်တော့, ပြဿနာရေရှည်ရလဒ်များနှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. သံသယမီးမောင်းထိုးပြအများအပြားလေ့လာမှုများထောက်ပြသည်။ Prause ခဲ့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံအတော်ကြာလေ့လာမှုတစ်ခုမှာ Balzarini, Dobson, ချင်း, နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ်ရဲ့ (2017) ယခင်လေ့လာမှု (Kenrick, Gutierrez, & Goldberg, 1989) ပုံတူကူးယူရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။ ပုံတူပွားခြင်းအားဖြင့်၊ စွမ်းအားကောင်းသောနမူနာအမြောက်အများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် erotica ကိုကြည့်ခြင်းသည်အမျိုးသားများအားဆွဲဆောင်မှုနည်းခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုတေသနတွင်အရေးကြီးသောကန့်သတ်ချက်များပါဝင်သော်လည်းအရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ဒီလေ့လာမှုကသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကအဝတ်အချည်းစည်း ၁၆ ခုကို ၁၅ စက္ကန့်ကြည့်ပြီးတစ် ဦး ချင်းစီကတစ်စုံတစ်ယောက်အားဆွဲဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလျော့နည်းသွားစေတာကိုမဖြစ်စေခဲ့ဘူးဆိုတာသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်မီဒီယာများ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်သိသိသာသာသိသာထင်ရှားပြီးအသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း (ဥပမာ - Wright et al ။ , 16, 15) နှင့် / သို့မဟုတ်အချို့သောစိစစ်သူများပေါင်းစပ်မှု မှလွဲ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲကြောင်း၊ ကြောင်းမြင့်မား scripting သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Leonhardt et al ။ , 2018) ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, Vandenbosch (2018) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုရေရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးမီအောင်ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဟိုအခိုင်အမာထောက်ခံမှုအတွက်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအများအပြားဖော်ပြခဲ့တယ်။ အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်များ (ဥပမာ - longitudinal correlations, observational, experimental) နှင့်အတူနောက်ထပ်လေ့လာမှုများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုအခိုင်အမာကိုထောက်ခံနေပုံရသည်၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်လေ့လာသည့်လေ့လာချက်များကကတိကဝတ်နိမ့်ကျမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Lambert, Negash, Stillman, Olmstead, & Fincham, 2012) နှင့်နှောင့်နှေးမှုလျှော့ချခြင်းလျှော့ချခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုသေးငယ်သောပိုမိုမြန်ဆန်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုရရှိရန်၊ နောက်ပိုင်းတွင်ဆုပေးခြင်း၊ Negash, Sheppard, Lambert, & Fincham, 2016) ။ မကြာသေးမီက meta-analysis သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (Tokunaga et al ။ , 2019) ။ ဤလေ့လာမှုများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများသည်ရေရှည်လိင်အရည်အသွေးနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းခိုင်လုံသောအထောက်အထားအဖြစ်မယူသင့်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးနေသောပင်ကိုယ်မူလပြproblemsနာများရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခိုင်အမာယုံကြည်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
Balzarini RN, Dobson, K. , ချင်း, K. နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ်, အယ်လ်, 2017 ။
စမ်းသပ်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70, Pp.191-197 ။
Kenrick et al သုံးခု preregistered, High-powered ပွား။ (1989)
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် erotica မှကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ယောက်ျားမိန်းမတို့
ထိတွေ့ပြီးနောက်မိတ်ဖက်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်း၏ ratings အကဲဖြတ်
Kenrick, Gutierres နှင့် Goldberg (၁၉၈၉; လေ့လာမှု ၂) ကလိင်ခြားသူများ၏လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာပုံရိပ်များနှင့်ထိတွေ့သောဆက်ဆံမှုများတွင်အမျိုးသားများသာမကအမျိုးသမီးများမဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်မှာသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏လိင်ဆွဲဆောင်မှုအတွက်အဆင့်နိမ့်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (d = 0.91) နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်သောမေတ္တာ (d စိတ္တဇအနုပညာပုံရိပ်များနှင့်ထိတွေ့ယောက်ျားထက် = 0.69) ။ ဤသုတေသနသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိယောက်ျားများအပေါ် erotica ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများကိုနားလည်ရန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားသော၊ စွမ်းအားမြင့်သောအနီးကပ်တုန့်ပြန်မှုသုံးခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမူရင်းနှင့်ပုံတူပွားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို meta-analysis လုပ်သည်။ လိင်ခြားသူများ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟူသောမူလရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။
keywords: Centerfolds; Erotica; မိတ်ဖက်ဆွဲဆောင်မှု; မတ်ေတာသ; ပွား; Reproducibility
☆ ဤသည်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့် Lorne ကမ့်ဘဲလ်မှချီးမြှင့်တဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည် လူမှုရေးသိပ္ပံနှင့်ကနေဒါလူ့သုတေသနကောင်စီ [ထောက်ပံ့ငွေအရေအတွက်ကို 122848].